Vanogadzira ginger uye Factory - China ginger vagadziri
tumira kunze kwenyika matsva miriwo ginger uye garlic inotengeswa
Zvakanakira: yakachena, hapana zvipembenene tupukanana, hapana mushonga wezvipembenene, ruvara rweyero, hombe muviri wakakora, giredhi repamusoro Hwepamusoro, kuravira kwechokwadi, hutano hutano, kumeso pamusoro, yero mukati uye yero kunze, inokodzera kutengesa kunze kwenyika yese inonaka inopisa uye zvine simba rekudzora mabhakitiriya, chengetedza muviri uine hutano hwakanaka pasherufu hupenyu hwakareba uye munzvimbo yakakodzera, Inogona kuchengeta kweanenge makore matatu isu tine yedu yekugadzirisa chirimwa kuburitsa ginger nyowani, kuwacha, kupukuta, kuchengetedza, kurongedza ...
Kukosha Kwehutano: Ginger nyowani ine detoxifying athari sterilization, ginger mune iyo ginger mumuviri, izvi zvinogona kuburitsa antioxidant enzyme, ine simba rakasimba rekubata neoksijeni radicals, asi zvakare inoshanda kupfuura vhitamini E. Ginger inogona kukurudzira iyo gastric mucosa , inokonzera vasomotor Center uye inonzwira tsitsi nerve reflex yekumutsa pabonde, inokurudzira kutenderera kweropa, kukurudzira dumbu basa, kurwadziwa nemudumbu, kudikitira, antipyretic athari. Jiang zvakare inowedzera kuchengetedza kwegastric juic ...
yemhando yepamusoro mutengo wakanakisa Shandong nyowani zvinonhuwira jena yeyero ginger
Zvimiro: Yakachena pamusoro, isina tupukanana tupukanana, hapana banga, hapana nhungirwa, isina kuora, isina kuumbwa, hapana ganda rechipukanana rakatetepa, muviri wakazara, kupenya kwemavara uye kubwinya, yero yenyama, tambo diki, tambo inopisa ine mwero, kuravira kunonaka kwekubika, kupfuma zvinovaka muviri kuhutano hwevanhu. Yakareba masherufu hupenyu, inogona kusvika anopfuura makore maviri kana ichinge yachengetwa zvakanaka. Inokodzera tembiricha: 12-13 degree. Zvimiro: 1.Ginger-inochengeta-nyowani inorimwa papurazi, yakanyatso kurimwa nevarimi, organic organic haina kusvibiswa, hanya ...
Maonikisi edu ane hutano hwakanyanya uyo ane echisikigo phytochemicals ayo anokwanisa kuita nemuviri wemunhu kutanga uye kuchengetedza hutano hwakanaka. Isu tinotengesa kunze hanyanisi mumhando dzakasiyana siyana uye mamakisi. Isu tinotenga hanyanisi zvakananga kubva kuvarimi vane mbiri zvikuru avo vanorimwa pasina kushandisa mishonga inokuvadza yezvipembenene nemakemikari. Maonikisi edu matsva uye nehutsanana akarongedzwa nemajute mabhegi kuve nechokwadi chehurefu hupenyu hwakareba. Eiii edu akapatsanurwa zvine hungwaru vachishandisa mamakisi, saizi, hupfumi kuravira uye ...